Ny “Famotsiana” Ara-tSosialy Araka izay Iainana sy Ahitàn’ilay Lasibika Afro-Kolombiàna Azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2017 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Ελληνικά, Italiano, Nederlands, Español
Juliette Micolta , sary nalain'i Paloma Fuentes. Sary nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkala ‘Afroféminas’ ary nahazoana alàlana ny famerenana mamoaka azy.
Ity ny fijoroana ho vavolombelona nosoratan'ilay lasibika, Juliette Micolta, nivoaka voalohany tao amin'ny Afroféminas ao anatin'ny fampisaintsainana momba ny niainan'ireo taranaka afrikàna sy ny fanavakavahana any Kolombia ary any amin'ireo faritra hafa ao Amerika Latina. Maherin'ny 10% amin'ny mponin'i Kolombia no taranaka afrikàna ary, any amin'ny faritra sasany toy ny ao Pasifika, izy ireo no manome ny 90% amin'ny mponina. Ankehitriny dia izay ireo no mandrafitra ny vondrom-piarahamonina iray taranaka afrikàna nefa miteny espaniola sy tena velona ary matanjaka.
Vao valo taona monja aho raha nahatsapa ny fahasamihafàko. Raha mbola zaza ianao ka tonga ao aminà sekoly iray feno ankizikely, ny hany zavatra hitanao dia ireo ankizy. Ho ahy, tsy nisy ny naha-samihafa azy, mandra-pahatongan'ny andro iray nilazana ahy ho “mainty!” ary dia toran'ny hehy daholo ny rehetra.
Tsy mbola nahalala na inona na inona aho saingy izany no niteraka ny fanatonako voalohany ny mpitsabo saina. Fantatro araka izany fa hafa aho, ary tsy nahafaly ahy izany.
Taty aoriana, rehefa tany amin'ny kolejy aho, tsaroako ireo namako rehetra nanana volo nalamalàma. Ho ahy, manja ny endriky ny voloko. Tamin'izany fotoana izany ihany, noresahan'ireo mpampianatra ny momba ireo razambe mainty hoditra izay nandevozina. Nolazaina araka izany fa taranak'andevo aho, tsotra izao fotsiny.
Tsy mba noresahna tamiko velively ny momba an-dry Garvey, Mandela na i King. Tsy noresahana tamiko velively ny negra Casilda sy ireo tantarany nanampiany ireo rahalahiny ka nitondràny azy ireny ho any palenque (toerana mitoka-monina any an-tendrombohitra, niafenan'ireo andevo nandositra). Tsy nohazavaina tamiko velively ny momba an'i Rosa Parks. Tsy nanaovana fanamarihana tamiko velively ny zavanisy hoe avy any Afrika izahay.
Ry Christophe Colomb na George Washington no nolazaina ahy ary dia tsy maintsy niasa taminà lahatsoratra an'arivony momba ireo olona izay tsy tsaroako intsony aho, no sady tsy manamarika akory ny tantarako amin'ny maha-vehvavy mainty ahy.
Ary dia nanomboka nanatsotra ny voloko aho sy nanandrana nanao izay hahafotsy kokoa ahy araka izay azoko natao mba ho ekena eo anivon'ny fiarahamonina.
Tsaroko ilay mpampianatra iray izay, isaky ny miantso ahy, dia atombony amin'ny fakàna tàhaka ireo mainty. Hoy aho tamin'izany hoe tsy dia olana. fa natao hihomehezana fotsiny ary dia aleo hitohy ny fiainana. Nezahako ny namafa tanteraka ny fomba fiteniko sy ireo teny maintiko.
Avy ao Bogotá, ao Kolombia, tanànan-dry zareo Fotsy aho. Tamin'izany fotoana izany, tsy dia mbola betsaka toy ny ankehitriny ny Mainty tao. Dia niditra tamin'ny fanatsorana volo tamin'ny fomba simika àry aho, sy namolaka ireo fomba fanao nahazatra ahy ary, indray andro, dia nividy mihitsy ankosotra manafotsifotsy kokoa.
Tsy nisy nandaitra mihitsy izany.
Ketraka aho, tsy maintsy nataoko izay hampahazava kokoa ny hoditro. Mbola izaho foana aloha no nanana ny volonkoditra matroka kokoa tao anatin'ny ankohonana ary tsy tiako ny hijanona amin'izany. Rehefa tafiditra teny amin'ny anjerimanontolo aho, mbola nanohy nisaina tahàka izany ihany. Rehefa lazain'ny olona hoe “Mainty” aho, dia asehoko azy ireo fa tsy mahafaly ahy izany.
Niaina tao anaty fiarahamonina fotsy ara-tsosialy aho, toerana izay tsy tsara mihitsy ny maha-mainty. Toerana izay tsy tsara ny hanananao volo henjana ary toerana izay isainana hoe ny Mainty dia midika fananàna vody sy nono fenofeno.
Izao e, fantatrareo tsara, samy tsy misy ananako izy roa ireo.
Tsy taranak'andevo izahay, fa taranak'olombelona
Teo am-pihainoana mozika aho indray andro no tafalatsaka tamin'ny hiran'i Barrintong Levy mitondra lohateny hoe Mandela free. Rehefa nandre io hira io, naniry hikaroka ireo razambeko aho. Tonga saina aho araka izany hoe ny fiarahamonina no nanery ahy hanafotsy tena. Ny fahenoana ny teny hoe “mainty” ho toy ny fanambaniana dia tafiditra amin'ny fiainana andavanandron'ny ankamaroan'ìireo vehivavy taranaka afrikàna. Tsy tokony hatao ny fanatsorana ny volon'ny tena mba ho ekena ao anaty fiarahamonina.
Ireo ankizy ho voadio ara-tsosialy nefa tsy ho tonga saina amin'izany akory no eritreretiko. Avakavahana ry zareo nefa tsy mahalala na inona na inona momba izay razambeny na ireo olona niady mba hisian'izany. Inona no ho fiantraikany amin'ireny ankizy ireny rehefa tsy toriana ny tahàka izany?
Tsy taranak'andevo izahay, fa taranak'olombelona naetry ho andevo, ary io, tsy ampianarina anay any an-tsekoly. Misy Shiliana namako izay, ohatra, miteny fa tsy mba niresahana velively izay resaka fanandevozana izany izy, na ireo mainty mpitarika tao anatin'ny Tantara. Nahoana ? Nefa i Shily dia nànana mainty foana, ireo Afro-shiliàna.
Inona no anton'ity fanabeazana “fotsy” ity sy ity firehetampo hamongotra ny dindon'ny Mainty ity?